Kenya oo wadahadal ka galaysa sidii ay Ciidankeeda ugala bixi lahayd Soomaaliya | HADHWADAAG NEWS
Home Maqaalo Kenya oo wadahadal ka galaysa sidii ay Ciidankeeda ugala bixi lahayd Soomaaliya
Kenya oo wadahadal ka galaysa sidii ay Ciidankeeda ugala bixi lahayd Soomaaliya
Kenya ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay wadahadal ka gasho sida ay ciidamadeeda uga baxayaan dalka Soomaaliya, sida uu ku warramay wargeyska Nairobi ka soo baxa ee Daily Nation.
Wargeyska ayaa sheegay in wasiirka gaashaandhigga Kenya, Monica Juma ay hormuud ka noqon doonto wadahadalka oo qeyb ka ah qorshaha ciidamada AMISOM, Soomaaliya looga saarayo 2021-ka.
Ciidamada Kenya ayaa bishii October 2011 gudaha u galay Soomaaliya si ay halkaa ugula dagaallamaan xooggaga Al-Shabaab oo khatar ammaan ku hayay amniga waddankooda. Waxa ay hadda ku sugan yihiin qeybo kamid ah Jubaland.
Tan iyo 2011, xooggaga Al-Shabaab ayaa weerarro dad badan ay ku dhinteen ka fuliyay gudaha Kenya, taasoo keentay in qaar kamid ah shacabka iyo siyaasiyiinta dalkaasi ay dalbadaan in ciidankooda laga soo saaro Kenya.
Sikastaba ha ahaate arrintaan ayaa ku soo adeeysa xilli todobaadkan uu dagaal xooggan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubaland ku dhexmaray degmada Beled Xaawo ee dhacda xuduudda labada dal
Previous articleCiidamada Baydhabo oo qabtay Nin doonayay inuu is qarxiyo”
Next articleHalkan Ka Daawo:Wasiirku Xigeenka Arimaha Gudaha JSL Iyo Taliyaha Ciidanka Policeka Oo Xadhiga Ka Jaray Saldhig Cusub Oo Laga Hirgaliyay Deeganada Hoos Yimada Gobalka Maroodi-jeex.